Umbono weTolino 3 HD kunye neTolino Shine 2 HD, ii-eReaders ezintsha zeTolino Alliance | Zonke iReaders
Umbono weTolino 3 HD kunye neTolino Shine 2 HD, iiReaders ezintsha zeTolino Alliance
UJoaquin Garcia | | Izaziso, Tolia
Zimbalwa iintsuku ukuya Umboniso waseFrankfurt Kwaye njengesiqhelo, iTolino Alliance ithatha ithuba lokuveza ii-eReaders zayo ezintsha. Ngeli xesha khange iqulethwe kwaye sele bevakalisile ii-eReaders ukuba bazakubonisa, kodwa khange bathethe nto malunga neempawu zabo.
Kubizwa ii-eReaders ezintsha Umbono weTolino 3 HD kunye neTolino Shine 2 HD, iindidi ezimbini ze-eReaders premium Baza kukhuphisana neKobo Glo HD kunye ne-Kindle Paperwhite 3 ye-eReader esekwe kumboniso wabo.
Umbono weTolino 3 HD iya kuba yinto entsha, ephuculweyo kwaye kunokwenzeka kubiza kakhulu kune-Kindle Voyage. Kubonakalisiwe ukuba kuya kuba nexabiso eliphezulu, ke ukuba sithathela ingqalelo ukuba i-Tolino Alliance eReaders zihlala zibiza malunga nee-euro ezingama-150, eyona iya kubiza kakhulu iya kuba lixabiso kufutshane nohambo lohlobo.
Umbono weTolino 3 HD uya kumaxabiso aphezulu kunesiqhelo
Umbono weTolino 2 HD uya kuba ukuqhubekeka kosapho esiluthathe kancinci kwaye ngokobuqu ndicinga ukuba iya kuba luhlaziyo lwemodeli ngokwenkqubo kunye nenkumbulo kodwa andicingi ukuba kukuqhubela phambili njengazo zonke ii-eReaders eziphume kwiinyanga ezidlulileyo.
Kwiinyanga kuye kwakho intetho malunga iTolino Tab entsha, Ithebhulethi yeTolino enokulingana nemodeli yangoku yeTolino Tab 8. Malunga nethebhulethi asazi kwanto ngokuqinisekileyo, kodwa kunokwenzeka ngexesha lomsitho weFrankfurt Fair ukuba kukho into ekuthethwa ngayo.
Inyani yile yokuba ndikulindele ngokobuqu into entsha evela eTolino, kodwa la magama (ngakumbi umbono weTolino 3 HD) kunye nezi zibhengezo zindiphose kakhulu kuba kucingelwa ukuba iReaders zeTolino zazinezona zikrini zinamandla kwimarike Ngaba oku kuthetha ukuba ezi eReaders ziya kusebenzisa itekhnoloji entsha? Ngaba ziya kuba zibiza kakhulu kunohambo lohambo? Ngaba ziya kubakho ezinye iindaba kwiTolino eReaders?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » ngokubanzi » Izaziso » Umbono weTolino 3 HD kunye neTolino Shine 2 HD, iiReaders ezintsha zeTolino Alliance
Kuya kufuneka sinike ingqalelo kwiinyanga ezimbini ezizayo ukubona ukuba zeziphi iindaba ezizayo. Ndinyanzelisa ukuba umhlaba "eink" umiswe kakhulu kule minyaka idlulileyo. Ukusukela ukufakwa kokukhanya, andiziboni iindaba ezaneleyo zokundenza ndicinge ngotshintsho.
Ndicinga ukuba u-Eink kufuneka aphucule umahluko. Yinto ephuculweyo ngePearl kodwa inyani kukuba iCarta ayisiyinkqubela phambili njengoko besitsho (ubuncinci kwimbono yam).
Ndingathanda imvelaphi yokwenyani emhlophe (okanye eyona nto ikufutshane) kuba ngokukhanya kwescreen se-eink kusatsho grey encinci.
Ngendlela ... ndim ndedwa umntu obhloga kakubi mva nje? Ndiyibona "imisiwe" kangangeeyure kwaye ngesiquphe ngesibane ihlaziya ngamanqaku ama-2 okanye ama-3 ngexesha. Ngaba kuyinto eqhelekileyo? Khange ndihambe ngoluhlobo ngaphambili ...
Umbhali uba ngusozigidi ngokuthengisa iincwadi zakhe ngeAmazon
Ngaba umlilo omtsha oyi-50 $ ufanele ukuthengwa?